Ezikhathini zasendulo, isobho nge amakhowe Ilayisi ibize gribovnitsey. Ungadliwa lezi isobho ezimbalwa kakhulu, kodwa kukhona ezinye iziqondiso jikelele.
Okokuqala, mushroom isobho salokhu udinga ukukhetha izinga. Ayikho ukungcola, futhi nakakhulu isikhunta noma izikelemu kudliwa akufanele kube. Ikakhulukazi uhlushwa lezi zinkinga gribovnitsa isikhunta ezomile, njengoba labo amakhowe zidayiswa eqandisiwe, ukhulile, ngokuvamile ngaphandle kwesibeletho kanye nebubi ezifana ugogo abathengwé emakethe, akudingeki. Noma yimuphi wokudla ukhetha sokwenezela ezinkathazweni isobho, kungcono ukupheka ngokwehlukile. Ukuze isobho lase ayazika, esikhundleni amazambane ke ungakwazi ukwengeza puree neqanda oqoshiwe. Uma ufuna ukuthola gribovnitsu Okuyınqo, musa uyifaka lavrushku nezinongo - ke iphazamisa iphunga amakhowe. Futhi ekugcineni - lokhu dish ingalungiswa kusuka amakhowe fresh, kodwa abantu bomuzi ejwayele gribovnitsa amakhowe eqandisiwe noma omisiwe.
Gribovnitsa kusuka eqandisiwe Honey ukhunta
300 g uju eqandisiwe isidingo agaric batheleka 1.2 l amanzi anosawoti bese thumba imizuzu 20 Diced onion bese wengeza eyodwa kuya isikhunta. amazambane amabili futhi usike uthele epanini. Isobho angasuswa lapho okuphekiwe amazambane.
Gribovnitsa of amakhowe eqandisiwe nge ibhali
A ingilazi iyiphi amakhowe udinga Bilisa amanzi amaningi futhi uthathe yizicucu amancane. Khona-ke Fry. Ibhali ingilazi kanye ngamathumba futhi uxubha kahle, ukuthi musa banamathelane. Ikhasi wanquma izaqathe kanye ucezu isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi impande, gazinga in ibhotela. Onion Ungase futhi sauté, futhi zingabekwa ngqo isobho ngokuphelele.
Umhluzi okuholela ngemva decoction of amakhowe, akudingeki ukuba uthele. amalitha amabili isobho udinga ukubeka phezu komlilo, ukubeka amazambane 4 Imi ku cubes kanye ubilise kuze kuthambe. Bese wengeza imifino kuphekeke, futhi ukupheka futhi. Engeza amakhowe kuya isobho futhi uthele ibhali. Beka ambalwa amahlamvu of bay leaf bese upheka kuze amazambane okuphekwe. imizuzu engu-30 ukunikeza Infuse isobho ngaphansi lid ivaliwe. Lapho itafula ipuleti ngamunye ukubeka spoon ukhilimu omuncu ufafaze parsley oqoshiwe.
Gribovnitsa amakhowe eqandisiwe kanye zucchini ubisi
Lona engavamile kakhulu iresiphi gribovnitsy, ngoba ke ihlanganisa izithako enjalo ebonakala incongruous like amakhowe, ubisi zucchini. Sidinga ukuthatha 300 amagremu of amakhowe, ukhiphe cap, izingubo zawo futhi usike. Iziphunzi ezisele, 1 onion kanye izaqathe, futhi, ambalwa locezu kanye thumba isikhathi esithile e-olive oil kuze kuthambe. Khona-ke awathulule ku 2 amalitha amanzi, engeza amakhowe, zucchini 1 utamatisi Diced futhi 3, oqoshiwe njengoba fake ngangokunokwenzeka. Pheka isobho kuze kwenziwe ke ufafaze dill oqoshiwe kanye parsley futhi uma babefisa, emnyama. Ekupheleni isidlo Kufanele ugcwalise amagremu 100 ubisi ezintathu amaqanda izikhupha.
Gribovnitsa amakhowe omisiwe
4 idlanzana amakhowe omisiwe hashaza ngamanzi afudumele, bese ufaka ihora elingu-1 amanzi abilayo (hhayi ashisayo, futhi efudumele). amazambane amabili kufanele ahlanze futhi uthathe cubes ezincane, futhi kufanele ochotshoziwe 1 red anyanisi, 1 courgette, zucchini. Onion futhi zucchini cwilisa imizuzu 30, washiya ube isitashi. Lapho amakhowe liyakushunyayelwa elicibilikile, usike kubo, sigcwale amanzi bese gqoka umlilo. Lapho amathumba - Gcina umlilo esiphansi. Half oqoshiwe onion, indawo umhluzi. Khona-ke wabeka emuva amazambane efanayo. Ingxenye yesibili anyanisi bese sauté futhi ukuthumela in umhluzi. Lapho isobho abilisiwe, engeza zucchini kanye usawoti kuso. Ubilise kuze ithenda esitsheni uphawu ngesikhathi ukushisa low kakhulu. Lapho isidlo iphekwe, udinga lona phisa 30 amaminithi.
Gribovnitsa amakhowe fresh
800 g amakhowe amhlophe kahle wageza futhi ihlanzekile, uthathe izingcezu ezincane. Gcwalisa-ke ngamanzi thumba imizuzu 3, ke uthele ingxenye entsha amanzi kanye thumba imizuzu 15. 5 Sula amazambane, uthathe cubes, 1 onion fake shinkuem, izaqathe ezintathu ogayiwe Fry konke. Zazharku yabhebhetheka isobho kanye thumba enye imizuzu 10, engeza pepper, bay leaf, usawoti. Susa kusukela ukushisa futhi bagcizelele amaminithi 10.
Indlela iphalishi kwembumba ewusizo, nendlela upheke kuwo?
Pepperoni. Kuyini lokhu? Ungadliwa of ukupheka pepperoni
Kuyini anaphora, futhi isho ukuthini aqukethe?
Osenyameni Pink ngesikhathi sokukhulelwa - ukwesaba enkulu omama abakhulelwe
Siyaxolisa ukuba intombi yami
"Umcibisholo" (imephu) kwi Izibuyekezo ibalazwe ezokuthutha